बेलायतको ‘रेड लिस्ट’मा नेपाल पर्दा यात्रुलाई सास्ती - प्रवास - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १८, २०७८ नवीन पोखरेल
लन्डन — कोभेन्ट्री युनिभर्सिटीमा 'इङ्लिस ल्याङ्वेज टिचिङ एन्ड अप्लाइड लिङ्गुइस्टिक'मा मास्टर्स गर्न पूर्ण शुल्क १६ हजार ६०० पाउन्ड जुटाउन कम सजिलो थिएन ज्ञानेन्द्र थपलियालाई । ऋणधन गरेर युनी फि जुटाए, भिजा पनि लाग्यो । जब बेलायत टेके, थप २२८५ पाउन्ड (करिब चार लाख रुपैयाँ) होटल क्वारेन्टिनबापत तिर्नु पर्‍यो । सरकारी नियम पालना नगरी सुखै थिएन ।
सेप्टेम्बर इन्टेकमा आउनै पर्ने बाध्यता भएपछि १६ दिनको पहिलो सन्तान छोडेर आए उनी । ११ रात बिताएर ३० अगस्टमा होटल क्वारेनटिनबाट निस्किएका ज्ञानेन्द्र भन्छन्, 'नेपालजस्तो गरिब मुलुकबाट आएका हामीलाई त्यो शुल्क थाम्नै नसकिने हो । नेपाल सरकारले अलिकति लबिइङ गर्ने हो भने केही परिवर्तन हुन सक्थ्यो तर हाम्रो सरकार कमजोर छ ।'
लन्डन हिथ्रो नजिक चार तारे होटेलमा अरु सुविधा राम्रै भए पनि खाना नमिलेको उनी बताउँछन् ।
कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा आफ्नो बाबु गुमाउनुको पीडा छँदै थियो, नेपाल पुगेर बेलायत आउँदासम्म बेहोर्नु परेको थप मानसिक तथा आर्थिक क्षति वर्णन गर्न सक्दैनन् अर्जुन बोहोरा । बाबु बितेको खबर पाउनासाथ टर्कीस् एयरलाइन्सको आवतजावत टिकट ११ सय पाउन्ड तिरेर तुरुन्त नेपाल उडे उनी । बाबुको अन्त्येष्टि सकेर ५ हप्तापछि लन्डन फर्कन लाग्दा एयरलाइन्सले उडान रद्द भएको जनाउ दियो । यता काममा तत्काल आउनुपर्ने भएकाले अर्को दिनसम्म कुरिराख्न सम्भव थिएन । काठमाडौंमा एजेन्टलाई दुई लाख रुपैयाँ तिरेर उनी कतार एयरवेजमा लन्डन उत्रिए ।
लन्डन आइसकेपछि ११ रातको खर्चिलो होटल क्वारेन्टिन अनि दुईपटक पीसीआर परीक्षण झन्झट । 'नजिक होटल नभएर गेटवीक पुर्‍यायो । होटल क्वारेन्टिन बस्दा कतै निस्कन नपाइने कारावास जस्तो अनुभव भयो', अर्जुनले सुनाए, 'खाना पनि नमिठो अनि समयमा नआउने । यो वर्ष दशा पनि कम रहेनछ ।'
उनले होटल क्वारेन्टिनबापत १७५० पाउन्ड तिरेका थिए । तर, अहिले त्यो शुल्क बढेर २२८५ पाउन्ड पुगेको छ ।
माथि उल्लेखित समस्याले समग्र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छ । जो बेलायत आउनै पर्ने अवस्थामा छन् वा यहींका बासिन्दा पनि आकस्मिक यात्रा गर्नु पर्दा अहिले ज्याँदै सकस भोगिरहेका छन् । विशेषगरी नेपालबाट बेलायत भित्रने यात्रुहरु बेलायतको कोभिड नियमका कारण प्रताडित बनेका हुन् । सरकारले अन्य देशबाट बेलायत भित्रँदा कोभिडको हानिकारक भेरियन्ट फैलन नपाओस् भनेर रेड, एम्बर र ग्रीन गरी तीन लिस्ट निर्धारण गरेको छ ।
‘रेड लिस्ट’मा रहेका देशबाट आउने यात्रुले १० दिन (११ रात) होटल क्वारेन्टिन बस्दा एक कोठाको प्रतिव्यक्ति २ हजार २८५ पाउन्ड, ११ वर्ष माथिकाले अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति १ हजार ४३० पाउन्ड र ५ देखि ११ वर्षका बालबालिकाले अतिरिक्त ३२५ पाउन्ड तिर्नुपर्नेछ । पाँच वर्ष मुनिकालाई नि:शुल्क छ । होटल क्वारेन्टिन नियम उल्लंघन गरे १० हजार पाउन्डसम्म जरिवाना र जेल सजाय छ । यात्रा गर्नु तीन दिनअघि, बेलायत आइसकेपछि दोस्रो र आठौं दिनमा पीसीआर परीक्षण गरि नेगेटिभ रिजल्ट पेस गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले निर्धारण गरेको क्वारेन्टिन शुल्क जागिरमात्र गरेर गुजारा गर्नेलाई निकै बढी हो । अहिले घुम्ने प्रयोजन (भिजिट भिजा) मा बेलायत आउन प्रतिबन्ध भए पनि ब्रिटिस राहदानीवाहक, बेलायतको आवासीय भिजा भएका र विद्यार्थी बेलायत आउन पाउँछन् ।
यतिखेर सेप्टेम्बर इन्टेकका लागि बेलायत आएका नेपालीसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले झन् सास्ती खेपिरहेको कन्सल्टेन्सीका एजेन्ट बताउँछन् । बेलायत आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि होटल क्वारेन्टिन शुल्क सुरुमा अरु कसैले तिरिदिने तर पछि बैंकलाई 'कारोबारबारे म जानकार छैन' भनेर रकम फिर्ता माग्ने क्रम (फ्रेण्डली फ्रड) बढेपछि अहिले होटल बस्ने स्वयंको कार्डबाट तिर्नुपर्ने कडाईले नयाँ नेपाली विद्यार्थी थप प्रताडित बनेका बताइन्छ ।
लन्डनस्थित एक ट्राभल एजेन्सी ट्राभल कन्सोलका निर्देशक बिराज भट्टका भनाइमा ‘रेड लिस्ट’का कारण अहिले नेपाल जाने झण्डै ९० प्रतिशत यात्रु घटेका छन् ।
‘महँगो खर्चमात्र होइन्, समय महत्वपूर्ण भएकाले मानिसहरु अत्यावश्यक यात्राबाहेक झन्झट बेहोर्न चाहँदैनन्’, भट्टले कान्तिपुरसँग भने, 'कोभिड महामारी अगाडिसम्म दसैं तिहार र एनआरएनए अधिवेशनका बेला नेपाल जाने नेपालीले बुकिङ भरिइसकेको हुन्थ्यो, यो पटक सुनसान छ ।'
अहिले एयरलाइन्स पनि समग्रमा करिब ८० प्रतिशत घटेका अनुमान छ । नेपालबाट बेलायत आउन कतार र टर्कीसमात्र सहज उपलब्ध हुने भएकाले यात्रा धेरै कठिनाइ र महँगो भएको बताउँछन् भट्ट । ‘हामीले यात्रुको सुविधाका लागि नेपाल र लन्डन अफिसबाट टिकट, होटल बुकिङ र पीसीआर टेष्टको प्याकेजमा समन्वय गरिरहेका छौं । तर उड्ने धेरै छैनन्’, भट्टले गुनासो गरे ।
नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारसँग पहल गरेर रेड लिस्टबाट हटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने माग बेलायतस्थित नेपाली समुदायको छ । ‘भारत रेडबाट एम्बर लिस्टमा आउने तर नेपाल त्यहाँभन्दा कम संक्रमण भएको देश 'रेड'मै पर्नु विडम्बना हो’, अर्जुनले भने, 'बेलायत भारतबीच व्यापारिकलगायत स्वार्थका कारण भारतमा परिवर्तन भयो । हाम्रो पक्षमा कसले बोलीदिने ?'
एम्बर लिस्टमा रहेको देशबाट बेलायत भित्रिएका यात्रुले होटल नगइ आफ्नै घरमा १० दिन आइसोलेसन बसे हुन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७८ २१:४९
'मह'को ४१ वर्ष : मित्रता भर हो, घर हो, डर हो [भिडियो]
भाद्र १८, २०७८ रीना मोक्तान, दिपेन्द्र रोक्का
काठमाडौँ — सहकार्य र सहयात्राको ४१ औं वर्ष । यो जोडीले पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र देख्यो । रंगमञ्चमा जन्मिएका यी दुईले एकअर्काका हात समाएर यात्रा सुरु गरे । उनीहरुको सहकार्य साथ, भरोसा र विश्वासबाट सुरु भयो । उदाहरण बने असल मितत्राको, अनि बलियो साथको । यी दुई परिवर्तनका वाहकमात्र बनेनन् हास्यव्यंग्यको नबिर्सने इतिहास बने । दर्शकको ताली र हाँसोमा जन्मिएको यो जोडी हो 'मह' ।
सहयात्राको ४१ वर्षलाई फर्केर हेर्दा हरिवंश अचम्म मान्छन् । '४१ वर्ष भयो र ! भर्खर १० वर्ष भएजस्तो लाग्छ । ४१ वर्ष सहयात्रा गर्न सकेको हुनाले दर्शकले ठूलो इज्जतको दृष्टिले हेर्छन् । मायाको दृष्टिले हेर्छन् । जातीय सद्भा‌वको दृष्टिले हेर्छन् । ४१ वर्षभित्र हामीले जीवनको ४१ अर्ब स्याबासी पाएका छौं,' महको 'ह' सुनाउँछन् ।
शरीरले साथ दिउन्जेल सहयात्रामा रोकिन चाहँदैनन् उनीहरु । यी दुई मित्रताको 'लोगो' बन्न चाहन्छन् । चार दशक लामो यात्राले उनीहरुलाई आफू राजनीतिभन्दा माथि रहेको आभास गराएको छ । नेपालको राजनीतिमा सहयात्राको संस्कार बसेन । २ तिहाई बहुमत जनताले दिँदाखेरी पनि मिलेर बस्न सकेनन् । तर यी दुईले ४० वर्ष एकसाथ बिताइसके । कति यात्रा त बिर्सिसके, कति मानसपटलमा धमिला याद बनेर बसेका छन् ।
सहयात्राको सुरुवातका वर्ष सम्झँदा मदनकृष्णलाई भने कति काम पूर्वजन्ममा गरेझैं लाग्न थालेको छ । जन्मनु अगाडि नै हरिवंशसँग चिनाजानी भएर कार्यक्रम गर्दै हिँडेको कल्पन्छन् उनी हिजोआज । 'आफूले आफैंलाई हेर्दै गर्दा सानो-सानो देख्छु । धन्य भगवान् ! हामी दुईले सहयात्रा गर्न पायौं । दुवैजना कला क्षेत्रमा समर्पित, यही लगावले यत्तिका वर्ष सँगै हिँडिरहेका छौं,' ७१ वर्षीया मदनकृष्ण सुनाउँछन् ।
कतिपय सहयात्राहरु आम्दानीमा अडिएका हुन्छन् । तर 'मह'को सहयात्रा आम्दानीभन्दा माथि बन्यो । मदनकृष्ण भन्छन्, 'पार्टनरहरु सुरुमा आम्दानी नभएसम्म खुब दु:ख गर्छन् । एकले अर्कालाई माया गर्ने, एक कप चियासँगै खानलाई कुर्ने गर्छन् । तर जब आम्दानी हुन थाल्छ । तब मनमा कुरा खेल्छ, उसले भन्दा मैले बढी पाउनुपर्छ, ऊ भन्दा म राम्रो । अनि झगडा सुरु हुन्छ । त्यस्तो दिनहरु हाम्रो यात्रामा आएन । मैले हरिवंशलाई एक पैसा पनि गद्दारी गरेको छैन । हरिवंशले पनि मलाई कहिल्यै गद्दारी गरेन ।'
एकअर्कासँग इमान्दार भएरै अगाडि बढ्यो 'मह' । पञ्चायत व्यवस्थाको व्यंग्य गर्दै बहुदलको पक्षमा उभियो । बहुदलीय व्यवस्थामा नेताहरु गाली गर्दै चिच्याएर भाषण गर्थे । महको लागि हास्यव्यंग्य भाषणको माध्यम बन्यो । गणतन्त्रमा देखिएका उच्छृंखल तत्व र नकारात्मक क्रियाकलापविरुद्ध महको व्यंग्य रोकिएको छैन । 'विपक्षी दलले संसद्‌मा गर्ने भूमिका हामीले बाहिर बसेर गर्‍यौं । हास्यव्यंग्य भनेको बाहिरको विपक्षी संसद् हो । हामीले त्यो पुस्तादेखि अहिलेसम्म व्यंग्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । त्यो हाम्रो उपलब्धि हो,' हरिवंशले भने ।
'मह'भन्दा अगाडिको जोडी 'हाडापाल'को हास्यव्यंग्यको अवशेष भेटिन गाह्रो पर्छ । 'मह'ले भने क्यासेट, रेडियो, टेलिभिजन, युट्युबमा आफ्नो व्यंग्यको रेकर्ड राख्न पाए । यसमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् उनीहरु । 'हामीभन्दा पहिलाको पुस्ताले पनि व्यंग्य गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरुले गरेको हास्यव्यंग्य रेकर्ड भएन । बिलाएर गए । तर हामी यति भाग्यमानी भयौं कि हामीले हाम्रो हास्यव्यंग्य रेकर्ड गर्न पायौं,' हरिवंशले भने, '४० वर्ष अगाडि हामीले गरेको हास्यव्यंग्यलाई अहिलेका बालबालिकाले हेर्न पाएका छन् । हामीले गरेको हास्यव्यंग्यले दर्शकलाई आकर्षित गर्नसक्यो । त्यो बेलाको पुस्तादेखि अहिलेका बालबालिकासम्मले हामीलाई चिन्छन् । यो हाम्रो उपलब्धि हो ।'
यात्राका दौरान मदनलाई पार्किनसन्सले छोयो । हरिवंशको साथकै कारण उनी शरीरलाई चुनौती दिँदै कर्ममा डटेर लागिरहेका छन् । यो ४१ वर्ष कसरी बित्यो उनलाई पत्तो छैन । 'एक्लै हिँडेको भएँ सेलाइसक्थें, थाकिसक्थें । एकजना साथीको सहयोग पाएकोले म अझै पनि हिँड्न सक्दै छु,' उनले मुसुक्क हाँस्दै सुनाए ।
कलाकारिताले नै उनी दुईलाई एक बनायो । मन मिल्ने मित्र बनायो । त्यो मित्रतामा कहिल्यै 'अहंकार' दुस्मन बनेन । 'अहंकार' पन्छाएर हिँडेपछि मित्रता र सहयात्रा दीगो बनेको उनी दुईको विश्लेषण छ । 'मैले मदन दाइलाई जानेर बुझेर केही कुरामा बेइमानी गरिनँ । उहाँले पनि मसँग बेइमानी गर्नुभएन । काँचको भाँडा जस्तै हामीले सम्बन्धलाई ख्याल गरेर बोकेर हिँड्यौं । खसालेनौं । खस्यो भने फुट्छ भन्ने कुरा मनमा रहेकाले यो यात्रा निरन्तरता हुनसकेको हो,' हरिवंश सुनाउँछन् ।
पूरा फिचर पढ्न :
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७८ २१:२९